Dynavix လမ်းညွှန်၊ ယာဉ်အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကင်မရာများ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » Dynavix လမ်းညွှန်၊ ယာဉ်အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကင်မရာများ
Android အတွက် + အခမဲ့အော့ဖ်လိုင်းဂျီပီအက်စ်အညွှန်း။
မြေပုံအချက်အလက်များ၏ + အခမဲ့တစ်သက်တာ updates များကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နှစ်။ သင်သွားလေရာရာ၌ Maps ကို device ကိုအတွင်းအပြင်သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်မရရှိနိုင်ကြသည်။
Real-time အတွက်တိကျအသွားအလာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အသွားအလာကင်မရာများ အသုံးပြု. Intelligent လမ်းကြောင်းလမ်းညွှန်မှု + ။
အမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှ real-time အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုခြင်း: Dynavix သည်အခြားယာဉ်များ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အချက်အလက်များ၏အမည်မသိစုဆောင်းမှု၏အခြေခံပေါ်မှာလက်ခံရရှိအသွားအလာဒေတာကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီ feature နှင့်အတူသင်နံနက်သို့မဟုတ်မွန်းလွဲပိုင်းအလုအယက်နာရီအတွက်ဥပမာမသွားနိုင်သောပို်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ Real-time အသွားအလာအချက်အလက်များ၏ function ကိုအီးယူလူဦးရေရဲ့ 87% ကိုဖုံးလွှမ်း။
စီစဉ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအနီးတွင်အွန်လိုင်းအသွားအလာကင်မရာများကနေပုံရိပ်များ: သာ Dynavix သင်တွက်ချက်လမ်းကြောင်းန်းကျင်တွင်တည်ရှိသောအသွားအလာကင်မရာများကနေဒေတာတွေကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Dynavix မြေပုံထဲမှာကင်မရာနှင့်အခြား features တွေကနေဒေတာတွေကိုကြည့်ရှု, သင်ကင်မရာထုံးစံစာရင်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Dynavix လက်ရှိဥရောပတစ်လွှား 7,500 ကျော်အသွားအလာကင်မရာများမှဝင်ရောက်ခွင့်ထောက်ခံပါတယ်။
အမှတ်များကို အသုံးပြု. အဆင့်မြင့်လမ်းကြောင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း: အသစ် Dynavix လည်းသိသိသာသာအမှတ်များများအသုံးပြုမှုနှင့်အတူလမ်းကြောင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းယခုအလွန်ရှင်းလင်းသောနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် tablet များပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
high-quality တိကျပြမြေပုံများ: နယူး Dynavix OpenStreetMap ဒေတာအသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်လက်ရှိအလေ့အကျင့်၏ခွန်အား OpenStreetMap အလွန်အသေးစိတ်နှင့်အခြားပံ့ပိုးပေးကနေမြေပုံထက်မကြာခဏပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။
• Turn-by-turn အမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်း (Data ပံ့ပိုးပေး INRIX) ကိုရှာဖွေ Real-time အသွားအလာသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုသို့မဟုတ်လမ်းပိတ်ပစ်) ကို အသုံးပြု. အော့ဖ်လိုင်းအသံဖြင့်အညွှန်း
အချို့နိုင်ငံများတွင်သို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်သေဆုံးသူလမ်းများရှောင်ရှား၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူအမှတ်များကို အသုံးပြု. •အဆင့်မြင့်လမ်းကြောင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
•ဘလူးတုသ် handsfree (မီဒီယာ mode ကိုသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုခ) ကနေတဆင့်အသံဖြင့်အမိန့်များအတွက်ပံ့ပိုးမှု
• * ဖြစ်နိုင်တင်ပို့မှုနှင့်အတူခရီး stats .csv
• 2D / 3D မြေပုံမြင်ကွင်း
•အမြင်ရွေးချယ်စရာ personalization ၏ Wide အကွာအဝေး
(device ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့) Maps ကို:
အယ်လ်ဘေးနီးယား, အင်ဒိုရာ, ဘီလာရုစ်, ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ခရိုအေးရှား, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, သြစတြီးယား, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဒိန်းမတ်, စတိုးနီးယား, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, ဂျီဘရောလ်, ဂရိ, ဟန်ဂေရီ, အီတလီ, အိုင်ယာလန်, လတ်ဗီးယား, လီချင်စတိန်း, လစ်သူ, လူဇင်ဘတ်, မော်လ်တာ , မက်ဆီဒိုးနီးယား, မွန်တီနီဂရိုး, မိုနာကို, နယ်သာလန်, နော်ဝေ, Slovakia လိုဗေးနီးယား, စပိန်, ပိုလန်ပေါ်တူဂီ, ရိုမေးနီးယား, ဆန်မာရီနို, ဆားဘီးယား, ဆွီဒင်, ဆွစ်ဇာလန်, တူရကီ, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ဗာတီကန်စီးတီး
အင်ဒိုရာ, သြစတြီးယား, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ဒိန်းမတ်, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, အိုင်ယာလန်, အီတလီ, လီချင်စတိန်း, လူဇင်ဘတ်, နယ်သာလန်, နော်ဝေး, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, လိုဗက်ကီးယား, စပိန်, ဆွီဒင်, ဆွစ်ဇာလန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
ပိုမိုသိရှိလိုပါကကြှနျုပျတို့၏ website www.dynavix.com သွားရောက်ကြည့်ရှု
သငျသညျ Dynavix အညွှန်းနဲ့တူလျှင်, ငါတို့သည်အနည်းဆုံးရေတိုပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသားဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။
• Navigation သိသိသာသာပင်နောက်ခံ running ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။ သငျသညျအညွှန်းသုံးပြီးအခါ charger ကိုချိတ်ဆက်ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
• Real-time အသွားအလာသတင်းအချက်အလက် function ကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။
+ တိုးတက်လာသောမြေပုံ downloads
+ မြန်နှုန်းကန့်သတ် Fixed မြင်သာ
Dynavix လမ်းညွှန်၊ ယာဉ်အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကင်မရာများ
22.27 ကို MB